होशियार ! कतै तपाईंको साथीले फेसबुकबाट पैसा माग्दै त छैन? - समय-समाचार
समय-समाचार बिहीबार, २०७८ जेठ १३ गते, ०७:४३ मा प्रकाशित
अहिले नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बनाई वा तपाईंकै साथीको अकाउन्ट ह्याक गरेर म्यासेन्जरमार्फत् तपाईंसँग पैसा माग्ने गिरोह निकै सक्रिय भइरहेको छ ।
यदि तपाईंको मिल्ने तथा विस्वासिलो साथीको मेसेन्जरबाट ‘पैसा चाहियो मलाई मोबाइल बैंकिंगबाट पैसा ट्रान्सफर गर्दिनुहोस्न , म भोलि वा पर्सी तिर्छु’ अर्थात ‘फलानो साथीको खातामा हल्दिनोस न’ भन्दै बैंक खाता नम्बर र नाम दिए भने, बिस्वास गरिनहाल्नुहोस । तपाईं फस्न सक्नुहुनेछ । पैसा मागेमा त्यो साथीलाई फोन गरेर डबल चेक नगरी पैसा ट्रान्सफर नगर्नुहोला ।
त्यस्तै गिरोह बाट ठगिएका एक व्यक्ति रमेस अर्याल (नाम परिवर्तन गरिएको) यसरी बताउँछन्:
“मलाई ‘तपाईंलाई कस्तो छ?’भन्दै मेसेज आयो मेरो मन मिल्ने साथीको फेसबुक मेसेन्जरबाट, प्राय: सधै गफ गरिरहने शैलीमा । केहीछिनको टेक्स्ट मेसेज पछि, मलाई ४८ हजार चाईएको छ भोली दिन्छु तपाईंको मोबाईल बैंकबाट ट्रान्सफर गर्दिन सक्नुहुन्छ? भनेर सोध्यो । आफ्नो मन मिल्ने साथीले त्यसो भनेपछि मैले ‘हुँदैन’ भन्ने कुरै भएन । हाम्रो टेक्स्ट मेसेजमा वार्तालाप यसरि चल्यो ।
‘हुन्छ नि, जरुर तपाईंको बैंक खाता नम्बर र नाम दिनोस न?’ मैले भने ।
‘राकेश राई, खाता नम्बर ०७००१४८१८०६०००१८, एन एम बि बैंक’। तर त्यो नाम र खाता नम्बर मेरो साथीको थिएन।
सुरुमा त मलाई संका लाग्यो किन आफ्नो नाम र खाता नम्बर नपठाएको होला भनेर । फेरी अर्को मनले सोच्यो ‘कसैको तिर्नु थियो होला त्यहि भएर डाइरेक्ट उसैलाई पठाउनु भनेको होला’ र मैले, ‘हस म अहिले नै ट्रान्सफर गर्दिहाल्छु’ भने । उसले ‘थ्याङ्क यु’ भन्यो, मैले ‘माई प्लेजर’ भने ।
उसले ‘पैसा ट्रान्सफर गरेको स्क्रिनसट पनि पठाउनु है’ भन्यो मैले हवस् भन्दै आफ्नो मन मिल्ने साथीलाई सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी हुँदै मेरो एन आई सी एसिया मोबाईल बैंकबाट उसले मलाई दिएको एन एम बि बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्दिहाले । र मैले उसलाई पैसा ट्रान्सफर गरिदिएको त्यो स्क्रिनसट पनि पठाए । त्यसपछि उसले ‘थ्याङ्क यु’ भन्दै र ‘म पछि कुरा गर्छु है अलिक हतारमा छु’ भनेर मेसेन्जरमा अफ भयो । मैले ‘थम्प्स अप’ ईमो पठाए ।
म ढुक्क थिएकी त्यो पैसा मेरै साथीले मागेको हो । त्यसको करिव २ घण्टापछि अर्थात दिउँसो एक बजेतिर ९८१३१८२३८९ बाट फोन आयो ‘तपाईं को हो?’ भन्दै। मैले आफ्नो नाम बताए । ‘तपाईं चै को हो?’ मैले भने । ‘म राकेश राई’ उसले भन्यो । ‘मैले तपाईंलाई पैसा पठाएको थिए नि पाउनु भो?’ मैले भनिहाले । ‘कति पठाउनुभाको थियो?’ उसले सोध्यो । ‘४८०००’ मैले भने ‘मेरो साथीले तपाईंलाई पठाईदिनु भन्नुभाको थियो नी?’ मैले सोधे, मेरो साथीको नाम लिंदै । तर उसले मेरो साथीको नाम नचिनेको बतायो । त्यो भन्ने बित्तिकै कुनै अर्कै मानिसले अकाउन्ट ह्याक गरेर मबाट पैसा लिएको रहेछ भन्ने मलाई लागिगयो । उसले आफू अहिले पांचथर फिदिम भएको पनि बतायो ।
मैले राकेश राईलाई ‘उसो भए त्यो पैसा मलाई फिर्ता गर्दिनोस’ भने । तर उसले पाएको पैसामा पहिल्यै २८ हजार खर्च भैसकेको र अब २० हजार मात्र बाँकी रहेको र त्यो पनि उसको अकाउन्टबाट तुरुन्तै पठाउन नसक्ने बतायो । र उल्टै मलाई ‘फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनुहोस न’ भन्यो ।
मैले ‘किन फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउने?’ भन्ने कुनै प्रश्न नगरी उसको नामको फेसबुक अकाउन्ट हेरे। त्यहाँ उसको रातो टिसर्ट लगाएको स्केच गरेको तस्बिर थियो । उसले त्यही नै आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट भएको बतायो । त्यो रातो टिसर्ट लगाएको तस्बिर उसको वास्तविक अनुहार देखिने खालको थिएन । ‘फेक अकाउन्ट’ जस्तो लाग्थ्यो । (यस्तो थियो उसको फेसबुक आईडी, यहाँ क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।)
मैले फ्रेन्ड रेक्वेस्ट पठाईन । ‘तपाइंको त फेक अकाउन्ट जस्तो लाग्छ त’ मैले भने। उसले ‘होईन, मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु न’ भनिरहयो । त्यसपछि उसले फोन राखिदियो ।
राकेश राईको फेसबुक अकाउन्ट यस्तो देखिन्छ ।
त्यसपछि म दोब्बर निश्चिन्त हुन् मेरै साथीलाई फोन गरे र भने उसले पैसा मागेको बारेमा । ‘हैट कहाँ पैसा माग्नु, रमेश जी? लौ मलाई थाहै छैन कसैले ह्याक गरेछ मेरो अकाउन्ट’ साथीले भन्यो । त्यसपछि मैले तुरुन्त एन एम बि बैंकलाई फोन गरे जहाँ रोशन राईको खाता नम्बरमा मैले पैसा पठाएको थिए । त्यहाँ मैले सबै कुरा बताए पछि बैंकका कर्मचारीले मेरो खाता नम्बर भएको एन आई सी एसिया बैंकमा फोन गरेर बुझ्नुहोस् अनि ‘हामीलाई सजिलो हुन्छ’ भने ।
त्यसपछि मैले मेरो बैंक खाता भएको एन आई सी एसिया बैंकलाई फोन गरे । उनीहरुले मलाई ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर उजुरी दिनुहोस र हामीलाई त्यतैबाट उजुरी हालेको प्रमाण सहितको इमेल गरिदिनुहोस अनि हामीलाई यताबाट काम गर्न सजिलो हुन्छ’ भने । त्यसपछि म फेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्की पोखरा गएँ र सबै बिबरण खुलाएर उजुरी दर्ता गरे । र त्यो इमेल पनि एन आई सी एसिया बैंकको इमेल ठेगाना compliancedepartment @nicasiabank.com मा पठाईदिए ।
अहिले मेरो केस ‘पेनडिङ्ग’मा छ । केस हेर्दै होलान । थाहा छैन मेरो पैसा आउँछ आउदैन । आसा गरेको छु ढिलो चाँडो आउला र त्यस्तो काम गर्ने गिरोह पनि समातिएला ।”
त्यसपछि हाम्रो समयसमाचार टिमले खोजि गर्दै जाँदा काभ्रेका बिष्णु पौडेल (नाम परिवर्तन गरिएको) पनि ठगिएको बताए । उनलाई पनि त्यही राकेश राई कै नाममा ५० हजार पैसा पठाईदिनोस्न ‘म भोली तिर्छु’ भन्दै उनको मिल्ने साथीको फेसबुक मेसेन्जरबाट मेसेज आएछ । ‘मेरो मिल्ने साथी थियो । म त ५ लाख नै भने पनि पठाईदिने थिए, जाबो ५० हजार,’ बिष्णुले भने । ‘भरे साथीलाई पैसा पाईस भनेर फोन गरेको त, के को पैसा मैले मागेकै छैन, मेरो अकाउन्ट ह्याक भएर कस्तो टेन्सन भाको छ पो भन्दा म त छाँगा बाट झरे जस्तै भएँ।’
विष्णुले पनि अहिले प्रहरीकोमा गएर उजुरी दिएको र छानबिनका लागि प्रोसेस अगाडि बढाएको बताएका छन् । ‘म त्यसै कहाँ छोड्छु र, त्यो राकेश राई नाम गरेको केटा २१ बर्षको रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो । मैले पाँचथर फिदिमको एन एम बि बैंक जहाँ राकेश राईले अकाउन्ट खोलेको रहेछ, त्यहाँ सप्म्पर्क गरे, उसले आफ्नो खाताबाट पैसा सबै निकालिसकेको रहेछ । अब त्यो गिरोह पता लाग्नेमा म ढुक्क छु । पैसा आउला या नआउला तर मान्छे चै म पत्ता लगाएर नै छोड्छु । आज मलाई दिनभरि धेरै तनाब भयो’, बिष्णुले भने ।
तपाईंहरुको जानकारीका लागि हामीले यो समाचार बाहिर ल्याएका छौं । यसरी ठगि गर्ने गिरोहहरुले तपाईंलाई पनि दुख: दिन सक्छन बेलैमा सचेत रहौं । यदि तपाईंले चिनेका साथीभाइको नयाँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो वा म्यासेन्जरमा पैसा माग्न थालियो भने, एकै व्यक्तिको नयाँ रिक्वेस्ट नस्वीकार्ने, पैसा मागिएको खण्डमा वास्तविक व्यक्तिलाई फोन गरेर सोध्नु होला । यदि शंकास्पद खाता/इसेवा वा अन्य विधिबाट पैसा ट्रान्सफर गराउन लगाइए तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराउनु होला । आफ्नो पिनकोड, पासवर्ड, बैंकिङ कारोबारको विस्तृत विवरण कसैलाई पनि शेयर नगर्नु होला। आफू पनि ठगिनबाट बचौ, अरुलाई पनि बचाऔं। यो जानकारी अरुको लागि पनि शेयर गर्नुस् ।